China Diamond Concrete Floor Dry Use Resin Polishing Pad for Floor Grinder Menufacture and Factory | Bontai
Ala diamond Concrete Akọrọ Jiri Resin Polishing Pad maka igwe ihe na-egwe nri
Nke a 3 inch torx polishing pads nwere ihe pụrụ iche, ha na-etinye usoro anyị kachasị ọhụrụ, nke na-eme ka arụmọrụ ha zuru oke na ala na-egbuke egbuke. Ha nwere ogologo ndụ dị ogologo ma na-akpa ike karịa paịlị resin na ahịa, nwekwara ike ịgbanye ala ngwa ngwa n'oge dị mkpirikpi.
Nha: 3 inch
Ojiji: eji akọrọ eme ihe
Ngwa: maka polishing ihe na terrazzo ala
Grit: 50# ~ 3000#
Aha ngwaahịa Ala diamond Concrete Akọrọ Jiri Resin Polishing Pad maka igwe ihe na-egwe nri
Ihe Mba. RP312003035
Ihe onwunwe diamond + resin
Grit 50# ~ 3000#
Ojiji Iji akọrọ
Ngwa Maka polishing ihe na terrazzo ala
Igwe etinyere Gaa n'azụ igwe ihe n'ala
Njirimara 1. High gloss agwụcha na obere oge2. Adịla akara na nkume ma gbaa elu
3. Ìhè doro anya na-egbuke egbuke ma ghara ịda mbà
4. Super ike ike, ngwa ngwa na-ewepụ ncha nke metal pad hapụrụ
Usoro ịkwụ ụgwọ TT, Paypal, Western Union, Alibaba ahia nkwa ịkwụ ụgwọ
Oge Mbuga ozi 7-15 ụbọchị mgbe nnata nke ugwo (dị ka ọnụ ọgụgụ)
Usoro mbupu Site n'igosipụta, site na ikuku, site n'oké osimiri
Asambodo ISO9001: 2000, SGS
ngwugwu Ngwungwu igbe igbe mbupụ ọkọlọtọ
Bontai 3 inch Torx Polishing Pads
Nke a 3 inch torx polishing pad bụ ihe atụ ọhụrụ nke injinia anyị mere, ọkpụrụkpụ bụ 10mm, grits 50 # ~ 3000 # dị. A na-eji ya maka ihe na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke na ala terrazzo ma dị mma maka ala nke nwere ọkara siri ike ma ọ bụ n'elu.
Grits 50 # ~ 200 # bụ paịlị polishing mgbanwe, ha nwere ike wepụ ngwa ngwa ncha nke paịlị diamond bond nke metal hapụrụ. Ha dị nkọ ma nwee ogologo ndụ karịa paịlị resin a na-ahụkarị n'ahịa.
Grits 400 # ~ 3000 # nwere ike inye ọkụ n'ala gị n'ime obere oge, ọ bụghị naanị na ọ nwere nnukwu nchapụta, kamakwa doo anya zuru oke.
Anyị bụ ọkachamara na-emepụta ngwaọrụ diamond, bụ ọkachamara n'ịzụlite, ịmepụta na ire ụdị ngwaọrụ diamond ọ bụla. Anyị nwere ọtụtụ ngwaọrụ na-egweri diamond na polishing maka sistemu polish n'ala, gụnyere akpụkpọ ụkwụ na-egweri diamond, wiil iko diamond, paịlị na-egbuke egbuke diamond na ngwaọrụ PCD wdg.
● Ahụmahụ ihe karịrị afọ 30
● ọkachamara R & D otu na ndị na-ere ahịa
● Usoro njikwa mma siri ike
● ODM & OEM dị
Xiamen Stone ngosi
Shanghai Bauma Fair
Nnukwu 5 Dubai Fair
Italy Marmomacc Stone ngosi
Russia Stone ngosi
Ngwugwu & Mbupu
1. Ị bụ onye nrụpụta ma ọ bụ onye ahịa?
A: N'ezie anyị bụ ndị nrụpụta, nabata ileta ụlọ ọrụ anyị ma lelee ya.
2. Ị na-enye ihe atụ efu?
A: Anyị anaghị enye ihe nlele n'efu, ịkwesịrị ịkwụ ụgwọ maka nlele na ibu onwe gị. Dị ka BONTAI ahụmahụ ọtụtụ afọ, anyị na-eche mgbe ndị mmadụ nwetara samples site n'ịkwụ ụgwọ na ha ga-eji ihe ha na-enweta. Ọzọkwa ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ nke sample dị obere ma ọ na-eri dị elu karịa nkịtị mmepụta .. Ma maka ikpe ikpe, anyị nwere ike na-enye ụfọdụ ego.
3. Kedu oge nnyefe gị?
A: N'ozuzu mmepụta na-ewe 7-15 ụbọchị mgbe nnata nke ugwo, ọ dabere na gị iji ukwu.
4. Kedu ka m ga-esi akwụ ụgwọ maka ịzụrụ m?
A: T/T, Paypal, Western Union, Alibaba ịkwụ ụgwọ mmesi obi ike.
5. Kedu otu anyị ga-esi mara ogo ngwaọrụ diamond gị?
A: Ị nwere ike ịzụta ngwá ọrụ diamond anyị ntakịrị iji lelee àgwà na ọrụ anyị na mbụ. Maka ọnụ ọgụgụ dị nta, ịkwesighi itinye nnukwu ihe egwu ma ọ bụrụ na ha emezughị ihe ị chọrọ.
Nke gara aga: 4" 50-3000 Grits Dry Diamond Polishing Pads maka nkume granite mabul na ihe
Osote: 17 inch diamond sponge n'ala polishing paịlị maka ihe, granite, marble
New imewe seramiiki bond diamond polishing pucks...
3 inch nkọ akọrọ diamond polishing pucks maka ngalaba ...
3 inch akọrọ eji ihe polishing pads maka mmiri mmiri ...
HTC diamond resin polishing pads maka ihe f ...